China SPC Floor 501 Ukwakha kanye Factory | I-Aolong
Iyini iphansi lamatshe?
Iphansi lepulasitiki lamatshe yigama lasekhaya (igama lizwakala lisezingeni eliphakeme kakhulu), igama elisemthethweni kufanele libe yishidi le-PVC phansi, izinto zangempela zokusetshenziswa ikakhulu zingumgubo wetshe, i-PVC, nezinye izinsiza zokucubungula (i-plasticizer, njll.) ungqimba olungavumelani luyinto ye-PVC, ngakho-ke ibizwa ngegama elithi "itshe lepulasitiki lamatshe" noma "ithayela leplastiki lamatshe". Inani elifanelekile lempuphu yetshe akumele libe phezulu kakhulu, ngaphandle kwalokho ubukhulu buphansi kakhulu, okungenangqondo (kuphela amathayela aphansi ayi-10 kuphela)%）. "I-PVC floor" isho iphansi elenziwe ngezinto ze-PVC. Yenziwe kakhulu nge-PVC ne-resin yayo ye-copolymerization, futhi ama-fillers, ama-plasticizers, ama-stabilizers, ama-colorants nezinye izinto ezisizayo zengezwa ku-substrate yeshidi eqhubekayo, futhi zikhiqizwa ngenqubo yokumboza noma nge-calendering, extrusion noma inqubo ye-extrusion.
Yenziwe kakhulu nge-PVC ne-resin yayo ye-copolymerization, futhi ama-fillers, ama-plasticizers, ama-stabilizers, ama-colorants nezinye izinto ezisizayo zengezwa ku-substrate yeshidi eqhubekayo, futhi zikhiqizwa ngenqubo yokumboza noma nge-calendering, extrusion noma inqubo ye-extrusion.
Iphansi lepulasitiki lamatshe yigama lasekhaya (igama lizwakala lisezingeni eliphakeme kakhulu), igama elisemthethweni kufanele libe yishidi le-PVC phansi, izinto zangempela zokusetshenziswa ikakhulu zingumgubo wetshe, i-PVC, nezinye izinsiza zokucubungula (i-plasticizer, njll.) ungqimba olungavumelani luyinto ye-PVC, ngakho-ke ibizwa ngegama elithi "itshe lepulasitiki lamatshe" noma "ithayela leplastiki lamatshe". Inani elifanelekile lempuphu yetshe akumele libe phezulu kakhulu, ngaphandle kwalokho ubukhulu buphansi kakhulu, okungenangqondo (kuphela amathayela aphansi ayi-10 kuphela)
Inani elifanelekile lempuphu yetshe akumele libe phezulu kakhulu, ngaphandle kwalokho ubukhulu buphansi kakhulu, okungenangqondo (kuphela amathayela aphansi ayi-10 kuphela)
I-PVC floor yinto ethandwa kakhulu yokuhlobisa phansi yomzimba emhlabeni, eyaziwa nangokuthi "impahla yomzimba okhanyayo".
Langaphambilini SPC Phansi SM-053
Olandelayo: Isitezi se-SPC 502